Pterostilbene na-acha uhie uhie (537-42-8) Nsukka - Phcoker
Pterostilbene ntụ ntụ bụ ihe na-akpata antioxidant nke na-adị na blueberries, mkpụrụ vaịn na heartwood uhie sandalwood. Pterostilbene .......
ikike: 1180kg / ọnwa
Pterostilbene uzuzu (537-42-8) video
Pterostilbene na-acha uhie uhie bụ nke a na-enweta na stvebenoid nke metụtara resveratrol, nke pụrụ ịnweta antioxidant, mgbochi mkpali, pro-apoptotic, antineoplastic na cytoprotective eme. N'elu nchịkwa, Raw Pterostilbene ntụ ntụ na-arụ ọrụ ya na-egbochi oxydant site na mpempe ihe na-eme ka oxygen na-arụ ọrụ (ROS), si otú a egbochi nrụgide oxidative na mmebi nke nje ROS. O nwekwara ike ime ka usoro nuklia nke 2 (Nrf2) nke erythroid nke 2 mepụtara na-eme ka 1 gbanwee ya ma mekwuo okwu nke dị iche iche enzymes antioxidants, dị ka superoxide dismutase (SOD). Tụkwasị na nke ahụ, Raw Pterostilbene ntụ ntụ nwere ike igbochi mbufụt site n'ịbelata okwu ndị dị iche iche na-eme ihe na-emetụ n'ahụ, dị ka interleukin (IL) XNUMXbeta, ụbụrụ necrosis factor alpha (TNF-a), nitric oxide synthase (iNOS), cyclooxygenases (COX) , na ihe nuklia kpatara kappa B (NF-kB). Ọ na-egbochi ma ọ bụ gbochie ibido ọtụtụ ụzọ mgbaàmà ndị metụtara carcinogenesis, ma mee ka ọtụtụ mkpụrụ ndụ gọọmenti na-egbochi ọrịa tumadi na-emewanye ka ọ na-ebelata nkwupụta nke ụfọdụ mkpụrụ ndụ ihe nketa na-akwalite ọgwụ. Ọ na-ebukwa ngwa ngwa apoptosis n'ime mkpụrụ ndụ tumo.
Pterostilbene na-acha uhie uhie (537-42-8) Smmezi
Product Name Raw Pterostilbene ntụ ntụ
Chemical Aha Raw Pterostilbene ntụ ntụ;
Klaasị ọgwụ ọjọọ Enweghị data maka dịnụ
molekụla Fnhazi C16H16O3
molekụla Wasatọ 256.301 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 256.11 g / mol
Nkịtị ziri 256.11 g / mol
Ọkara Ndụ nke Ndụ Enweghị data maka dịnụ
Sume Enweghị data maka dịnụ
Sịkwa akwa Tigwe Chekwaa na ụlọ okpomọkụ
Antinye A na - enweta stilbenoid nke sitere na nhazi site na resveratrol
Pterostilbene na-acha uhie uhie (537-42-8) Nkọwa
Pterostilbene bụ molecule methylated stilbene na enweghi ihe jikọrọ resveratrol, ọ bụ naanị ihe dị iche iche dị iche iche dị na otu pterostilbene molecule nke na-anọchi anya mmiri hydroxy dị iche iche na resveratrol molecule. Ọ bụ ezie na ihe ka ọtụtụ n'ime omume abụọ ahụ dị nhata, pterostilbene yiri ka ọ na-adọrọ nnọọ mmasị na-agbaso aghara aghara aghara ma nwee ike bụrụ ihe na-adịghị mma nke na-eme ka ọ ghara ịdị na-agwụ ya ma na-eme ka ọkpụkpụ ahụ ghara imebi.
Nanị otu nnyocha ka nyochaworo pterostilbene ntụ ntụ na ụmụ mmadụ. Ọ chọpụtara na mmụba na LDL-cholesterol na ihe na-emekarị ka ọ bụrụ na ndị na-eto eto cholesterol dị elu na-ewere 100 ma ọ bụ 250 mg kwa ụbọchị. O doro anya ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ dị ala na-eduga n'ịbelata ọbara mgbali elu, mana Mbelata nke ìgwè ndị were oke ọgwụ ahụ dị ike.
Pterostilbene ntụ ntụ (537-42-8) Ngosipụta nke Action
Pterostilbene na-alụso nchegbu oxidative ọgụ site n'ịbaghasị enzymes antioxidant. Ọ na - eme ka 1 (SOD1) na peroxiredoxin-4 (PRDX4), nke na - ejikọta ihe ikuku oxygen. Ndị nchọpụta ahụwo mmetụta a n'ime mkpụrụ ndụ anya mmadụ, na-atụ aro na pterostilbene nwere ike ichebe ya pụọ ​​na mmebi nke oxidative. N'aka nke ọzọ, Pterostilbene na-emekwa ka ụzọ SIRT1 gosipụtara na-echebe megide mmebi nke cellular. Ụzọ a na - eme ka okwu nke p53, protein nke na - echebe DNA ma gbochie mwepụ nke nwere ike iduga kansa.
Ọ bụ ezie na SIRT1 nwere ike ichedo ụfọdụ mmebi na mmebi nke na-ewere ọnọdụ ka anyị na-eme agadi. Otú ọ dị, pterostilbene abụghị ọgwụ anwansi megide ịka nká.
Nnyocha dịgasị iche egosila na pterostilbene na-ebelata nsị nke ụbụrụ necrosis kpatara-alpha (TNF-alpha). Nsogbu na-akpata nsogbu na-akpata mmetụ; pterostilbene nwere ike igbochi TNF-alpha na interleukin-1b (IL-1b) site na mbenata nke ikuku oxygen.
Pterostilbene na-egbochi nrụgide n'ime akụkụ nke ngwaọrụ cellular a na-akpọ reticulum endoplasmic, ma ọ bụ ER. N'otu nnyocha, mgbe mkpụrụ ndụ sitere na ngọngọ nke arịa ọbara ka e gosipụtara pterostilbene, ER ha azaghị ihe mgbaàmà na-adịghị mma, ha adighikwa afụ ọkụ.
Pterostilbene nwere usoro dịgasị iche iche nwere ike ịnweta kansa. O nwere ike ichebe mkpụrụ ndụ ahụike ma mebie mkpụrụ ndụ mgbochi. Na mkpụrụ ndụ glioma (ụbụrụ ma ọ bụ ọnyá akwara), pterostilbene belata Bcl-2 wee mụbaa Bax; mgbanwe ndị a na - eme ka mkpụrụ ndụ "igbu onwe" na - apụta ma mee ka mkpụrụ ndụ glioma nwụọ.
Pterostilbene na-egosi iji jiri nlezianya dochie mpaghara hippocampus na ụbụrụ. N'ebe ahụ, ọ na-eme ka ụbụrụ na-ahụ maka ụbụrụ (BDNF) nweta ụbụrụ, protein protein kinase (MAPK) na-arụ ọrụ mitogen, na protein mmechi protein nke CAMP (CREB). Ndị a na-enye aka protein atọ a na-etolite, na-amụba, ma na-emeghachi omume gburugburu ebe obibi ha. Ndị na-agwọ ọrịa SNRI na-ejikarị ụzọ ndị a eme ihe. Na hippocampus, pterostilbene na-amụba protein nke a na - akpọ Nrf2, nke na - eme ka njupụta nke protein ndị antioxidant nwekwuo.
Na monoamine oxidases, MAOs, bụ enzymes ndị na-akụda ndị na-ahụ maka ụbụrụ na ụbụrụ. Otu n'ime enzymes ndị a, MAO-B, jiri nlezianya kwatuo dopamine; n'ihi ya, ọgwụ ndị na-egbochi MAO-B mụbaa dopamine na ụbụrụ. Dị ka nchọpụta a chọpụtara n'oge na-adịbeghị anya, pterostilbene na-egbochi ọrụ MAO-B ma, ya mere, na-enwekwu ohere dopamine.
Pterostilbene ntụ ntụ nwere ike igbochi ọrịa Alzheimer site n'ichebe ụbụrụ site na beta-amyloid (Aβ). Ụzọ amaghi ama, ma o yiri ka ọ gụnyere PI3K na Akt, ndị na-edozi abụọ na-akwado nchekwa, mmụta, na ọganihu neuron.
Iji nke Pterostilbene ntụ ntụ (537-42-8)
Cholesterol dị elu
Pterostilbene ntụ ọka a na-atụ aro (537-42-8) Ụdị
N'ime ụmụ mmadụ, a na-atụle ihe ruru 250 mg kwa ụbọchị dịka nchekwa. E gosipụtara usoro dị elu dị ka ndị a iji belata ọbara mgbali ma kwalite ụfọdụ ọnwụ. LDL cholesterol ọkwa mụbara nke ọma, ma enwere mmetụta a kpamkpam na mgbakwunye nke mkpụrụ vaịn.
N'ime ụmụ anụmanụ, ọtụtụ doses nke dị ala enwewo mmetụta mmetụ. N'agbata 1 na 2 mg kwa kilogram nke arọ ahụ kwa ụbọchị belata nchegbu na ụmụ oke. N'iji nghota nke ihe na-emekarị n'etiti ụmụ oke na ụmụ mmadụ, dose mmalite (mg) maka mmadụ ga-abụ ibu ha na kilogram 12.3. Nke ahụ na - arụ ọrụ:
4.6 mg / ụbọchị maka onye 125 lb
5.5 mg / ụbọchị maka onye 150 lb
6.5 mg / ụbọchị maka onye 175 lb
7.3 mg / ụbọchị maka onye 200 lb
Ọ bụrụ na ị na-ewere pterostilbene ntụ ntụ maka abamuru nke uche ya, ị nwere ike ịmalite na oke dị ala. Otú ọ dị, ọ bụ nanị ụbụrụ ndị dị obere ka enwere mmetụta dị oke ụbụrụ, ma ndị mmadụ nwere ike ịba uru dị ukwuu na uru dị elu.
Uru nke Pterostilbene ntụ ntụ (537-42-8)
Pterostilbene ntụ ntụ bụ antioxidant nke bụ isi, ọ na-enwekwa chemopreventive, antiinflammatory, antidiabetic, antidyslipidemic, antiatherosclerotic na mmetụta neuroprotective. N'akụkụ aka, ọ nwekwara ụfọdụ uru dị n'okpuru:
Na-enyere aka ịlụso kansa ọgụ
Mee ka cognition mara mma ma gbochie ọnwu cell n'ime ụbụrụ
Na-ebelata Sugar Ọbara
Na-echebe Mkpụrụ Obi
Ka Chebe Obi
Enwere ike ịkwado ụda arọ
Nwere ike iwelie elu ndụ
Na-ebelata ọbara mgbali
Ntuchi Coluracetam ntụ ntụ (135463-81-9)